မြေနီကုန်း၊ မြေနုလမ်းထဲက မာလရှမ်းကော၊ မာလာငါးနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတရုတ်ဟင်းပွဲလေးတွေရတဲ့ ‘ရွှေပြည့်’ 600 views
မြေနီကုန်းအနီးတဝိုက်ဘာစားရမလဲဆိုတာ ဆိုင်တွေကပေါသလိုလိုနဲ့ တကယ့်တကယ်စားမယ်ဆို သိပ်စဉ်းစားမရတော့ဖူး။ ဘာစားလို့ဘာစားရမှန်းမသိ၊ ကိုယ်စားနေကျဆိုင်ကလွဲရင်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားရ ခက်သွားပြန်ရော။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ မဟာမြိုင်မှတ်တိုင်ဘေးက မြေနုလမ်းလေးမှာ ဖွင့်တာမကြာသေးတဲ့ ဒီ ရွှေပြည့် ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးက ဟင်းပွဲလေးတွေက အရသာလေးတွေကောင်းတယ်။ ဈေးသိပ်မကြီးတဲ့ထဲပါတယ်၊ ဖွင့်ခါစဆိုတော့ သိပ်မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သေချာလေးပြောပြပေးမယ်နော်….
အရင်ဆုံး ဒီဆိုင်မှာဘာတွေရလဲဆိုရင် မာလရှမ်းကောကအဓိကအစားအစာအနေနဲ့ရတယ်။ နောက် Seafood အဏ္ဏဝါ၊ မြန်မာကြက်ခေါပုတ်၊ ငါးသုခ၊ စီချွမ်းငါးအဲ့ဒါတွေရတယ်။ ကြက်ဥခေါက်ဆွဲကြော်၊ နို့ခြောက်ကြော်၊ ဝက်နံရိုးကြော်၊ မြေအိုးမြီးရှည် တွေက ဒီဆိုင်မှာလူကြိုက်အများဆုံး ဟင်းပွဲတွေတဲ့။ ထပ်ပြီးရသေးတာက One plate တစ်ယောက်စာတရုတ်ဟင်းပွဲလေးတွေ။ ဆိုင်ပုံစံလေးကလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးနဲ့ အမြင်လေးလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ဒီဆိုင်လေးကကွန်ဒိုလေးမှာ ရုံးတွေရှိတယ်ဆိုတော့… အဲ့ဒီနားရုံးတက်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း စားစရာတစ်ဆိုင်တိုးသွားတယ်ပေါ့… Heavy မစားချင်ပဲ နေ့လည်စာတစ်ယောက်စာလေးဆိုလည်း သူ့ရဲ့ One Plate မီနူးလေးနဲ့ဆိုတော့ (၂၀၀၀)၊ ကနေ (၃၀၀၀)ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်။ အရသာရှိရှိလည်းစားရတယ်။ ဗိုက်လည်းပြည့်တယ်။
မာလရှမ်းကော - မာလရှမ်းကောကတော့လူတိုင်းသိနေပြီးသားပါ။ ဒီမှာတစ်ခုလေးပြောချင်တာက ဒီကဈေးနှုန်းလေးတွေကအသင့်အတင့်လေးတွေ။ 100gm မှာမှ အသီးအရွက်ဆိုရင် (၆၀၀)၊ အသား၊ငါး ဆိုရင် (၂၀၀၀)နဲ့ ပင်လယ်စာဆိုရင် (၂၅၀၀) ဒီပင်လယ်စာထဲမှာ ပုစွန်ပါပါတယ်။ တစ်ကောင်ကိုဘယ်လောက် ဆိုပြီးတော့ ပေးရတာမဟုတ်တော့ပိုသက်သာသွားသလိုပဲ။ နောက် အသားလုံးလေးတွေကယူတာနည်းရင် အချိန်နဲ့မချိန်တော့ပဲ တစ်လုံးကို (၅၀၀)ဆိုပြီးတော့ပဲတွက်ထည့်လိုက်တာပဲ။ နောက် မာလာခေါက်ဆွဲတို့ ဘာတို့က 100gm ကို (၁၀၀၀)ပဲ။ မှိုတွေဆိုရင်လည်း (၁၂၀၀)ပဲ။ ဆိုတော့ တကယ့်တကယ် ကိုယ်ယူတဲ့အလေးချိန်နဲ့ဆို သိပ်အများကြီးမကျတော့ဖူး။ ကိုယ်တွေယူတာဆို အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ကနေ သုံးယောက်စားလို့ရတယ်။ နောက် သူ့ဆီကအရွက်တွေက ကန်စွန်းရွက်ဆိုလည်း အပေါ်ပိုင်းအနုလေးတွေကိုပဲ စည်းပေးထားတယ်။ ဗူးညွန့်ဆိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ အရသာအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အရမ်းလည်းမပေါ့၊ အရမ်းလဲ မလေးပဲ လူတိုင်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အရသာမျိုးလေးပဲ။ အထုံ၊ အစပ်ရယ်ကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Level ပြောလို့ရသလို အရည်၊ အသုပ်လည်းကိုယ်စားချင်သလိုစားလို့ရတယ်။ ဒါနဲ့ဒီကဝက်သားက ဝက်သုံးထပ်သားလေးဆိုတော့ စပ်နေတဲ့အချိန် အဲ့ဒီဝက်သားလိပ်လေးစား။ လုံးဝမိုက်တယ်။
နောက်တစ်ခုက Seafood အဏ္ဏဝါ - သူဆိုရင် ပုစွန်နဲ့ဂဏန်းရဲ့အချိုတွေကဟင်းတစ်ခုလုံးကို အနံ့တင်မဟုတ်၊ အရသာပါဖုံးလွှမ်းထားတာ။ ဆီလည်းအရမ်းမများ၊ ခြောက်ကပ်ကပ်လဲမဟုတ်တဲ့အတွက် စားရတာလည်း အဆင်ပြေတယ်။ ပုစွန်နဲ့ဂဏန်းကလည်း ကိုက်လိုက်ရင်ကို ကြွပ်ကြွပ်၊ ကြွပ်ကြွပ်နဲ့ လက်အိတ်လေးလည်းပေးထားတော့ သာသာယာယာလေးဆွဲရုံပဲ။ သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက တစ်ပွဲကို (15000)ကျပ်။ အခြားဟင်းလေးတွေနဲ့ရှယ်ပြီးစားရင် သုံး၊ လေးယောက်လောက်စားလို့ရတဲ့အတွက် တစ်ယောက်အနေနဲ့ တွက်ရင်သိပ်မကျတော့ဖူး။
မြန်မာကြက်ခေါပုတ် - ကိုယ်တွေပုံမှန်ကြော်ကြော်ပြီးစားနေကျ ခေါပုတ်ကိုမှ မြန်မာကြက်လေးနဲ့ပြန်ကြော်ချက် လေးလုပ်ပေးထားတာ။ ခေါပုတ်လေးကလည်းစီးစီးလေးနဲ့ အနံ့သင်းသင်းမွှေးမွှေးလေးကလည်း ဗမာကြက်လေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်။ ချိုပေမယ့်အီသလိုမဟုတ်ပဲ အစပ်အဟပ်တည့်တည့်လေးပဲ။ မစပ်တဲ့အတွက် ကလေးနဲ့ လူကြီးတွေလည်းစားလို့ရတယ်။ သူကတစ်ပွဲကို (၈၅၀၀)ကျပ်၊ သူကလည်းရှယ်စားရင်နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်စားရတယ်။
နောက် ထူးခြားတာလေးနောက်တစ်ခုက နို့ခြောက်ကြော်။ ကိုယ်တွေအတွက်တော့ အထူးအဆန်းကြီးကိုဖြစ် လို့။ ကြော်ကြော်ပြီးချင်းလာချပေးတော့ အငွေ့လေးတွေနဲ့အတူ မွှေးမွှေးအနံ့လေးတွေပါပါလာတာ။ စားကြည့်လိုက်တော့လည်း နွားနို့လေးသောက်လိုက်ရသလို၊ ပါးစပ်ထဲ အဲ့ဒီအရသာလေးကျန်ခဲ့တယ်။ သူကတစ်ပွဲကို (၃၀၀၀)ကျပ်။ အဲ့ဒါလေးစားကြည့်ခဲ့ကြပါ… အက်မင်တော့တော်တော်လေးကြိုက်လို့
ဖက်ထုပ်ကြော် - ဖက်ထုပ်ကြော်ဆိုလည်းတော်တော်တန်တယ်။ အထဲမှာ ကြက်သားနဲ့ ပုစွန်အကောင်လိုက်လေးထည့်ပေးထားတာ။ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံလေးပဲ။ သူကလည်းတစ်ပွဲကို (၃၀၀၀)ကျပ်ပဲ။ အအေးမီနူး ထဲမှာဆိုရင်လည်း ရာသီပေါ်အသီးဖျော်ရည်နဲ့ Cold Drinks တွေရှိတယ်။ ရာသီပေါ်အသီးဖျော်ရည်တွေက တစ်ခွက်ကို (၁၅၀၀)ကျပ်ပဲ။
တစ်ခု ------ April လ(၁)ရက်နေ့ကနေ (၃၀)ရက်နေ့အထိ 10% Discount ရှိတယ်တဲ့နော်… နည်းသလားလို့… ဆိုင်သစ်လေးလည်းဖြစ်တော့ မြည်းစမ်းကြည့်ကြအုံး…. ကိုယ်တွေတော့ဒီကအစားအစာ အရသာလေးတွေကြိုက်လို့ ပြန်ရှဲပေးခဲ့ပြီနော်…..
ဆိုင်ကမနက် (၁၀)နာရီခွဲကနေ ည(၉)နာရီခွဲအထိဖွင့်တယ်။ လိပ်စာက အမှတ် (၉၉) မြေနုလမ်း၊ လမိုင်း (Lamai)ကွန်ဒို၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်။ (မဟာမြိုင်ဆေးခန်းဘေးလမ်းထဲကနေဝင်သွားပြီး လမ်းကွေ့လေးထိလျှောက်ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ကိုချိုး ပြီးရင် ဆိုင်လေးက ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိပါတယ်) Reserve လုပ်ချင်ရင် 09-766460607, 09-420944409 ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ မြေနုလမ်းအနီးတဝိုက်ဆိုရင် Delivery ပို့ပေးတယ်တဲ့နော်။
Honey (MyLann) #MyLann #Online_Restaurant_Directory #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Food_Lover #Food_Crazy #Food #Shwe_Pyae #Mala_Shan_Kaw #Mala_Fish #Chinese_Food #San_Chaung